“သိန်းတစ်​​သာင်းခွဲ ထီ​ပေါက်ပေမယ့် ကွမ်းယာဆက်ရောင်းဦးမယ့်​ ဇနီးမောင်နှံ ..”
၄ ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း တစ်သောင်းခွဲ အောင်ဘာလေထီဆုကြီးကို မန္တလေးမြို့ မြရည်နန္ဒာရပ်ကွက် ဗ ၂၃ ထဲက ပွင့်သစ် ကွမ်းယာဆိုင် ပိုင်ရှင် ဇနီးမောင်နှံက ဆွတ်ခူးသွားပါတယ်။ မန္တလေးမြို့ မြရည်နန္ဒာရပ်ကွက် ဗ ၂၃ မှာ နေထိုင်တဲ့ ပွင့်သစ်ကွမ်းယာ ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်တဲ့ ကိုဝင်းကျော်နဲ့ မသီတာအေးတို့ဟာ […]
သမီးဖြစ်သူ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အမိုက်စား ကုမ္ပဏီကြီးကို အလည်အပတ်သွားရောက်ခဲ့တဲ့ အောင်ရင် အဆိုတော် အောင်ရင်တို့ မိသားစုလေး ကတော့ ခုဆိုရင် တော်တော်လေးကို ပြီးပြည့်စုံတဲ့ မိသားစုလေး တစ်ခုဖြစ်သွားပါပြီ။ သရုပ်ဆောင် မိုးအောင်ရင် တစ်ယောက် မူးယစ်ဆေးဝါးအမှုနဲ့ ထောင်ဒဏ်ကျခံ နေရတာကနေပြီး သမ္မတကြီးရဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ မိဘရင်ခွင်အရပ်ဆီ […]
“မြင့်မြတ်နဲ့ ရုပ်ရှင်အတူတူ ရိုက်ကူးရိုက်ချင် သေးတယ်လို့ ဖွင့်ဟလာတဲ့ နေခြည်ဦး”
မြင့်မြတ်နဲ့ ရုပ်ရှင်အတူတူ ရိုက်ကူးရိုက်ချင် သေးတယ်လို့ ဖွင့်ဟလာတဲ့ နေခြည်ဦး ပရိသတ်တွေချစ်ကြတဲ့ Blogger မလေး နေခြည်ဦးက သူမရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အနုပညာ စွမ်းရည်ကြောင့် အချိန်တိုအတွင်းမှာ အောင်မြင်မှုတွေ များစွာ ရရှိပိုင်ဆိုင် နေသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ နေခြည်ဦးက အခုဆိုရင် ဝါရင့် နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်တွေနဲ့အ တူတူ […]
မိဘမဲ့ကလေးတွေကို သီချင်းတွေနဲ့ ပျော်အောင် လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ညီနန္ဒ
မိဘမဲ့ကလေးတွေကို သီချင်းတွေနဲ့ ပျော်အောင် လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ညီနန္ဒ စွန့်ပစ်မိဘမဲ့ ကလေးလေးတွေကို ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ အနုပညာနဲ့ ပျော်အောင် လုပ်ပေးခွင့်ရလို့ ပျော်ရွှင်မိတယ်လို့ ညီနန္ဒက ဆိုပါတယ်။ သူတတ်နိုင်သလောက် အလှူငွေလည်း လှူဒါန်းခဲ့ပါသေးတယ်။ သရုပ်ဆောင် ညီနန္ဒက ပြည်မြို့မှာ ရှိတဲ့ စွန့်ပစ်မိဘမဲ့ ကလေးလေးတွေ ဆီကို […]
“(၄) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီ သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ကံထူးရှင် ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။”
“(၄) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီ သိန်းတစ်သောင်းခွဲ ကံထူးရှင် ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။” (၁.၆.၂၀၁၉) ApannPyay ( 1.6.2019 ) ဒီနေ့ထွက်ရှိသော (၄) ကြိမ်မြောက် သိန်းတစ်သောင်းခွဲ အောင်ဘာလေထီ ကံထူးရှင် ထွက်ပေါ်လာပါပြီ။ ( 1.6.2019 ) ဒီနေ့ထွက်ရှိသော (၄) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ […]
“အပျိုရည် လူပျိုရည် ပျက်မှာကို မကြောက်တော့တဲ့ 21 ရာစု အမှန်တရား….”
အပျိုရည် လူပျိုရည် ပျက်မှာကို မကြောက်တော့တဲ့ 21 ရာစု အမှန်တရား…. 21 ရာစု အမှန်တရား လိင်မှုကိစ္စဟာ ပွင့်လင်းမြင်သာလာပြီး အချစ်စစ်ဆိုတာ ဈေးကြီးလာတယ် ။ အပျိုရည် လူပျိုရည်ပျက်မှာ ကြောက်ဖို့ထက် ဖုန်းပျောက်မှာကို ပိုပြီးကြောက်တတ်လာကြတယ် ။ ခေတ်မှီတယ်ဆိုတာ သောက်တတ် စားတတ်မှ ဆော်တွေ […]
UEFAရဲ့ တရားဝင်ဝက်ဆိုဒ်မှာ ဖော်ပြခြင်းခံလိုက်ရတဲ့ “စိုင်းစိုင်း”
UEFAရဲ့ တရားဝင်ဝက်ဆိုဒ်မှာ ဖော်ပြခြင်းခံလိုက်ရတဲ့ စိုင်းစိုင်း ချန်ပီယံလိဒ်ဖလား ရရှိမယ့်အသင်း ခန့်မှန်းနေတဲ့ ပုံရိပ်ကို UEFAရဲ့ တရားဝင်ဝက်ဆိုဒ်မှာ ဖော်ပြခြင်းခံလိုက်ရတဲ့ စိုင်းစိုင်း ဒီအကြိမ်တော့ ဥရောပဖလား ငါးကြိမ် ရဖူးထားတဲ့ လစ်ဗာပူးလ်အသင်းနဲ့ ဗိုလ်လုပွဲကို ပထမဆုံး အကြိမ် တက်ရောက်လာတဲ့ တော့တင်ဟမ်ဟော့ စပါးစ်အသင်းတို့ ကစားကြမှာပါ…… ဥရောပ […]
“သားမယားပြုခြင်းကို ခံခဲ့ရသည့် (၇)တန်းကျောင်းသူမိန်းကလေးရဲ့ ဘဝပေးအခြေအနေ” မင်းဘူးခရိုင် စလင်းမြို့နယ် ပေါက်လေးပင် အုပ်စု လက်ပန်ဦး ကျေးရွာမှ အသက်(၁၄)နှစ် အရွယ် (၇)တန်းကျောင်းသူမိန်းကလေး။ ကံအကြောင်း မသင့်၍ယုတ်မာသူတစ်ဦး၏သားမယားပြုခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။ယုတ်မာသူလည်း ထောင်ကျသွားသည်။ယုတ်မာသူ၏ ဘဝနိဂုံးချုပ်ခဲ့သော်လည်း…. မိန်းခလေးတွင်တော့ယုတ်မာသူ၏ သွေးသားကကျန်ခဲ့သည်။ သောကြာနေ့နံနက်တစ်နာရီမှာ အမွှာညီအစ်မကိုမွေးသည်။မိန်းခလေးကို ဘာဆက်လုပ်မလဲမေးတော့သမီးလေးနှစ်ယောက်ကိုကြီးပြင်းအောင်မွေးမည်ဟုပြောသည်။သူမ၏ သမီးနှစ်ဦးကို သူတစ်ပါးသို့မွေးစားရန်မပေးနိုင်ကြောင်း။ […]
မြန်မာနိုင်ငံ၏.. အကျော်ကြားဆုံးထဲကဖြစ်တဲ့ …ပင်းတယ လှိုဏ်ဂူ၏ …အံ့ဖွယ် ထူးခြားချက်များ… (သိထားသင့်တဲ့ ဗဟုသုတပါ) ပင်းတယလှိုဏ်ဂူ ၏ ထူးခြားချက်များ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကျော်ကြားဆုံး (၁၀)နေရာထဲက တစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်သည့် ပင်းတယဂူ၊ ကမ္ဘာ့ခရီးသွား စာမျက်နှာများပေါ်များတွင်ထင်ရှားဖော်ပြခဲ့သည့် ပင်းတယဂူသည်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ပင်းတယမြို့တွင်တည်ရှိသည်။ ပင်း တ ယ ဂူသည် […]
(၄) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ထီေ ပါက်စဉ် တိုက်ရန် (၄ )ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း (၁၅၀၀၀) ဆု သိန်း ၁၅၀၀၀ ကခ ၅၅၅၂၈၁ ( ၄ )ကြိ မ်မြောက် ကျပ်သိန်း ( ၁၀၀၀၀) ဆု သိန်း ၁၀၀၀၀ […]